Dagaallo Culus oo Muqdisho ka dhacay: MSF oo 24 saac ku Daweysey 121 Dhaawac ah - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Talaadadii ay Febraayo ahayd 24ka, dad badan oo rayid ah ayaa lagu dhaawacay dagaallo soo cusboonaaday oo ka dhacay goobo badan oo ka mid ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Kooxaha caafimaadka ee Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn/Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa ilaa iyo hadda Cusbitaalka Dayniile ku daweeyey 121 rayid ah, waana tiradii ugu badneyd ee dhaawac ah oo mar timaadda ilaa iyo intii MSF ay barnaamijka qalliinka ka furtey Dayniile oo ku taalla duleedka Muqdisho bishii Sebtembar 2007.
121ga qof ee ilaa shaley lagu daweeyey qolka daaweynta degdegga ah ee cusbitaalka, 47 ka mid ah waxa ay ahaayeen haween iyo carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 jir, taas oo mar labaad tilmaameysa qiimaha ay dadka rayidka ah ku bixinayaan iska horimaadyada socda.
Afar bukaan, oo ay laba carruur yihiin ayaa shaley ku dhintey qolka daaweynta degdegga ah. Sagaal iyo toban qof oo dhaawac ah, oo ay ka mid yihiin toddoba carruur ah oo dhaawacmey markii dugsigooda la duqeeyey ayaa maanta lagu daweeyey qolka daaweynta degdegga ah. Ilmo yar ayaa markii dambe dhintey.
Dhammaan dhaawacyada waxaa sababey qarax ama xabbad. Waxaa jirey dad ay soo gaareen dhaawacyo badan, oo u badan caloosha, xabadka, iyo madaxa. Ilaa iyo hadda, siddeed bukaan ah ayaa u baahdey in qalliin degdeg ah lagu sameeyo.
“Kooxaha ayaa habeenkii oo dhan shaqeynayey iyaga oo aan nasan,” ayaa uu tiri Shelagh Woods oo ah Madaxa MSF ee Soomaaliya.
Sanadkii 2008, cusbitaalka MSF ee Dayniile ee leh 60ka sariirood waxa uu daweeyey 5,250 qof oo qaba dhaawacyo, 3,093 ka mid ah ayaa laga daweeyey dhaawacyo ka dhashey dagaalka. In ka badan kalabar dadka bukaanka ah ee dhaawacyadu ka soo gaareen dagaallada ayaa ahaa haween iyo carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 sano jir.
MSF oo ah urur bani’aadamnimo oo madax-bannaan, eexasho aqoon, dhexdhexaadna ah, ayaa ka shaqeynayey Soomaaliya ilaa 1991 waxaana uu ugu yeerayaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh iska-hor-imaadyada in ay ixtiraamaan bed-qabka iyo ammaanka dadka rayidka ah.
Tags: 24-saac, dagaal, dhaawac, Muqdisho